5 Zvikonzero Yekudzidza Europe By Train In December | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Zvikonzero Yekudzidza Europe By Train In December
Pane chimwe chinhu chinopa kuzadzikisa pamusoro chinyararire akanyatsomutarira kubva chitima hwindo, regai unofunga? saka, kanganwa pamusoro dyidzana kuchengeteka frisks, zvakajeka Ziplock mabhegi kuti mvura, razero zvakavanzika uye chimbuzi-shoma busses. Hapana nzira iri nani kuongorora Europe pane nechitima muna December. Pano zvikonzero zvedu nei!
1. Touring Europe nechitima muna December uye muchaona – shomana vashanyi
Vanhu vazhinji makwai akakurumbira dzakasiyana panguva Summer kana vachida kuongorora Europe. zvisinei, ari jeka kunze anoita kuuya naro, vanhu. Yakawanda vanhu! Tinoda kuongorora Europe nechitima muna December nekuti pane vashanyi inongova vashoma. More girl, runyararo, uye nzvimbo iwe!
2. Touring Europe nechitima muchando nzira – isingadhuri rate
Chikonzero nei tiine isingadhuri prices ingori kuti rokufunga 1! Vashoma vanhu vakaenzana isingadhuri zvose! Tiri kutaura isingadhuri Hotels uye njanji matikiti pasi (Zvisinei zvimwe vasipo Christmas /Goredzva).
A muromo: Discounts anogona kuwanikwa zvakawanda mumataundi maduku zvikuru pakufambira ushanyi. Ehe saizvozvo, Maguta makuru havafaniri kuedza nesimba kuti ari vatengi, saka kuronga nokuchenjera kana uri munhu bhajeti!
3. Misika uye Mitambo
Check out dzedu rinotyisa romukova pamusoro The Best Winter Festivals in Europe kana uri kuda more info yedu pamusoro mapiki. Street Markets, zvakananga ndiwo emavambo kose panguva December. Saizvozvo, yava tsika December kubvira 1400 wacho! Kuva mumwe chitima kunoreva kunzwisisa, saka unofanira kusarudza kuti uchingoda garai refu pane imwe ukaona uchinyatsondida, zvino unogona! Ndiyo kunaka chitima kufamba. Ndicho chikonzero hapana nzira iri nani kuongorora Europe pane nechitima muna December.
Kana waita wamboona Christmas firimu, pane vakasungwa kuti mufananidzo mashiripiti kupendwa zvomumhepo. Mufananidzo hangu kuwira twemazaya echando, vana vachikanda snowballs, Icicles, ari muffled crunch wokufamba kuburikidza gobvu chando. Uye chokwadi, zviedza uye zvemaoresa! Pane dzimwe nzvimbo kuti muvengi ari kuratidzwa uchawana munzvimbo dzakawanda dzeEurope.
5. Ongorora Europe nechitima muna Zvita = Nguva yechando cuisine
Chii nani nzira kuongorora zvakasiyana zvokudya kunyika vane kupa? Touring Europe nechitima muna December, uye vane mukana kushanyira maguta akawanda mune zuva rimwe. Buda yomunzvimbo musika muuye nevamwe nezvikafu zvishoma shure muchitima! Unogona kuva chisvusvuro, chisvusvuro, uye Supper mu 3 maguta akasiyana!
muromo: mu Siwizarendi uye mativi France, edza raclette uye fondue, zvose izvo dzakavakirwa kumativi zvakafadza chizi. VeGermany vanoda gurai yemhuka rikawira chando kana, uye zvakakangwa chestnuts vari mutengesi sadza pa Christmas misika. Musakanganwa kuti arayire munhu kudivi mulled waini!
Akagadzirira Bhuku chitima rwendo hwose? Hukuru! Musoro kuti SaveATrain uye unakirwe nekunetseka uye kubhuka-mubhadharo pasina chitima kufamba!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexplore-europe-train-december%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#DecemberHoliday Kisimusi KisimusiTrain europetravel chikafu holidayeurope longtrainjourneys Train Travel traveltips
Kudzidzisa Kwaungaita Bhizinesi Kufamba Zvakakodzera
Business Travel nechitima, Rovedza Kufamba Matipi, Chitima Kufamba UK, Travel Europe